Ziyanda iinzingo zaseIsland | News24
Ziyanda iinzingo zaseIsland
Amatyotyombe i-Island eMakhaza.umFANEKISO: UNATHI OBOSE
Zivathe iqaqa iinkokheli zokuhlala kummandla wamatyotyombe i-Island, eMakhaza. Ezi nkokheli zityhola uceba we wadi uDanile Khatshwa ngelithi uyinikele umva ingingqi yazo. Zikwatyhole amapolisa ngokushiya uluntu kwiimfefe zezikrelemnqa.
Ngokwengxelo yezi nkokheli oka Khatshwa waye wabanyelisa ngethuba becanda iziza zabo kule ngingqi kunyaka ophelileyo. Zithi kususela ngoko wachasela waxela ithamsanqa.
Noxa kunjalo uKhatshwa uzikhabe ngawo omane ezi zityholo.
Ezi nkokheli zityhola oka Khatshwa ngelithi wafika wabayalela ukuba mabangokhi kuba lo mhlaba yindawo esoloko ihlala ifumile, kwaye ikwayindawo yokugcina izilwanyana, ntoleyo ingabangela bazale abantwana abakhubazekileyo.
Omnye weenkokheli zale ngingqi uNonceba Ndlebe uthe ususela ngoko zange aphinde alibeke uKhatshwa kulangingqi.
“Wafika apha sisakha iihoki zethu wasixelela ukuba masingokhi ngoba lendawo ihlala imanzi kwaye yindawo yemfuyo. Xa simxelela ukuba sizakokha ngoba sifuna iindawo zokuhlala wathi yena, ‘hlalani nizakuzala abantwana abazizidalwa’. Uthetha ukuthini xa esitsho, ayisosithuko eso?,” ubuze watsho uNdlebe. Wongeze ngelithi nangoku bengabahlali bazimele ngenkqayi elangeni kuba akabonakali nangotshengele okaKhatshwa.
Ezityanda igila ngale nyewe uKhatshwa utyhole abahlali ngokuyibaxa le yantlukwano, watsho esithi bayitolika ngendlela engeyiyo intetho yakhe.
“Eneneni kona ndandiyile kubo ngelaxesha babesabethelela bezama ukwakha. Ndabaxelela ukuba abanokwazi ukwakha phaya ngoba la ndawo isoloko inamanzi, kwaye lonto ingachaphazela iimpilo zabo ingakumbi abantwana bangosuleleka nazizifo,” ucacise watsho uKhatshwa.
Ukanti ukwazikhabile nezityholo zokuba akazange walubeka unyawo kula ngingqi. Uthe kuLwesithathu weveki ephelileyo ebenikezela nge zilamba kwiqela elijongene nokhuseleko kula ngingqi.
“Bendibanika izilamba ezazishiyeke ngokuya kwakusaziswa ngokusemthethweni neighbourhood watch kunyaka ophelileyo kuba bengenokusebenza bengenazinto zakunxiba,” utshilo.
U-Khatshwa ukwathembise ngokuzama ezinye izixhobo zokusebenza nangokuququzelela intlanganiso nabahlali kwiveki ezayo ukuze anikezele ingxelo malunga nophuhliso lwase Island.
U-Ndlela ukwabalule ukunqongophala kwamanzi nokungabikho kwezindlu zangasese kunye nombane njengeyona miceli-mngeni bajongene nayo.
“Sineempompo zamanzi ezimbini kuphela, enye yazo sayicela kwifama ekufutshane, yaza enye sayitsala kumatyotyombe aseMsindweni. Nazo ziphuma kancinci, side sifole xa silinde amanzi,” ucacise watsho.
U-Ndlela ubalule izinga eliphezulu lobugebenga nathe bubangelwa kukungabikho kwezibane.
“Sizinkokheli siye sathatha isigqibo sokuba sichithe zonke iihoki ezingahlali bantu kwakunye nezo zithengisa iziyobisi ukuzama ukulwa ubundlobongela,” utshilo uNdlebe. Uthe ngokuya kusanda iihoki nobundlobongela buya busanda.
“Ngoku iihoki ezikhoyo apha zingaphezulu kwama 300. Kwaye sinexhala lezikhukhula njengokuba kusondele iimvula zasebusika nje,” utshilo Ndlebe.
Ukwagxeke amapolisa ngoku ngayisiso le ndawo. Utyhole ngelithi abonakala xa eyokuvala okanye eyokuthatha utywala ezimokolweni.
Isithethi samapolisa kwisikhululo samapolisa aseHarare uKapteni Siyabulela Vukubi uzichaze njengobuvuvu izityholo zabahlali.
“Ingathi kwa abahlali aba bathetha beziphikisa xa bethi asibonakali kodwa bathi kwabona basibona xa siyovala izikroxo ezingekho mthethweni. Ukuvala izikroxo ikwangumsebenzi wethu into ethetha ukuthi siyajikeleza kuzo zonke iindawo ekufanele sihambe kuzo,” ucacise watsho uVukubi.